We Fight We Win. -- " More than Media ": မိတ္ထီလာက မိစ္ဆာတို့သွေးသောက်ပွဲ
မိတ္ထီလာမှာ အကြမ်းဖက်သမားတွေက လူတစ်ယောက်ကို ၀ိုင်းပြီး ရိုက်သတ်ပုံ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကို ကျနော်တို့ မိသားစုကြည့်လိုက်ရတယ်။
အရပ်ရှည်ရှည် ပုဆိုးလေးဝတ်ထားတဲ့ လူတစ်ယောက်က လူအုပ်နဲ့ဝေးရာကို ခတ်သွက်သွက်လေး လျှောက်လာရင်းက သူ့အနားကို တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်ဝိုင်းလာပြီး အရှေ့ အနောက် တောင် မြောက် ၀ိုင်းရိုက်လိုက်ကြတာ နောက်ဆုံးလဲကျသွား လဲကျသွားတဲ့ခန္ဒာကိုယ်ပေါ်ကို နောက်ထပ်အချက်ပေါင်းများစွာရိုက် ဓါးနဲ့ခုတ်သူခုတ်နဲ့ သင်္ဃန်းဝတ်ထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ကလည်း အားရပါးရ ၀င်ရိုက်ပုံတွေ မြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့မိသားစုအားလုံး ၀မ်းနည်းစွာ မျက်ရည်တွေကျခဲ့ရပါတယ်။
ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဒဘာသာကိုလည်း မုန်းမည်မဟုတ်ပါ။ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်အားလုံးကိုလည်း မုန်းမည်မဟုတ်ပါ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အခုဖြစ်နေတဲ့ အရိုင်းအဆိုင်းအကြမ်းဖက်သမားတွေက မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေအားလုံးမှမဟုတ်တာ။
တစ်ဖက်က အခုလို ဗုဒ္ဒဘာသာကို ခုတုန်းလုပ် အကာအကွယ်ယူ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းပြီး လူသားမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်ကို လုပ်သူတွေရှိနေသလို။နောက်တခြားတစ်ဖက်မှာလည်း ကျနော်တို့ကို ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေထဲကပဲ လူသားချင်းစာနာစိတ်ထားပြီး အကာကွယ်ပေး ကယ်တင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စိတ်ထားပိုင်ရှင်တွေ ရှိနေကြတာပဲ။
အခုလို မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းထဲက အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုရော အခြားမမြင်တဲ့အရပ်က အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုရော ဘယ်လူမျိုး ဘယ်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပါစေ တစ်ခုတော့ ပြောလိုက်ပါရစေ ဘာသာတရားတိုင်းမှာ တူညီစွာ လက်ခံထားကြတဲ့
၀ဋ်လည်ခြင်း(သို့)မိမိတို့ပြုခဲ့သမျှအရာရာကို ပြန်လည်ခံစားရမည်ဟူသည့် ဆုံးမထားသည့် ဘုံတူညီချက်တရားသည် လေးလေးနက်နက် ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိနေပါသည်။
(ဒီစာအောက်မှာ မှတ်ချက်ပေးကြမယ်ဆိုရင်တော့ ယဉ်ကျေးစွာပဲပေးကြပါ)
Hay Guy , if u r post is correct , share video . Don't write any how.
I can't effort to look for speak ..because of the worst violent who star to fire (WI Ra Thu & U Aung Thaung)
10 April 2013 at 05:42